Brindisi, oo ah magaalo taariikh badan ku leh xeebta Adriatic | Wararka Safarka
Brindisi waxay ku taalaa bangiyada Badda Adriatic, koonfur-bari ee Talyaaniga. Ku noolaa tan iyo wakhtiyadii hore oo ay ku guuleysteen Romanka 267 BC, waxaa loo yaqaanay "Albaabka Bari" duruufaha mudnaanta leh ee ay ku leedahay bilaabista safarada badda labadaba Greece iyo waliba dhulalka Aasiya.
Xilligan, waa a magaalo barwaaqo ah oo leh ku dhowaad sagaashan kun oo degganeyaal ah oo ku siinaya xeebo qurux badan iyo cimilo xasad badan Laakiin sidoo kale dhowr taallo oo muhiim ah iyo gastronomy aad u fiican. Haddii aad rabto inaad ogaato Brindisi, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad na raacdo.
1 Maxaa lagu arkaa Brindisi
1.1 Qalcooyinka Brindisi
1.3 Fagaaraha Duomo
1.4 Hadhaagii Roman
1.5 Taallo loogu talagalay badmaaxa
1.6 Taallo kale oo Brindisi ah
1.7 Agagaarka Brindisi
2 Waxa lagu cuno Brindisi
3 Goorma ayey fiican tahay in loo safro magaalada Talyaaniga
4 Sida loo tago Brindisi
Maxaa lagu arkaa Brindisi
Sidaan kuu sheegnay, magaalada Talyaanigu waxay ku taal salentina cad, xeebta Adriatic. Tan iyo wakhtiyadii Roman waxay ahayd deked ganacsi oo muhiim ah tanina waxay ku horseeday inay sii dhex marto Gothic, Byzantine, Norman iyo xitaa gacmaha Aragonese. Waxaan ku tusinaynaa waxyaabaha muhiimka ah ee aad ku arki karto Brindisi.
Magaalada waxay leedahay laba qalcadood oo cajiib ah. Midka koowaad waa Casaanka, waxaa loogu yeeraa midabka dhagaxan darteed, in kastoo sidoo kale loo yaqaan Aragonese, maxaa yeelay waxaa la dhisay xilligii Isbaanishka. Waxay ahayd qalcad difaac ah oo laga dhisay kan yar Jasiiradda San Andres.
Ta labaad waa Qasriga Suevo, la dhisay waqtiyadii Federico II (1194-1250), Boqorka Quduuska ah ee Roomaanka iyo Boqorka Sicily. Waxaad ka heli doontaa dekedda, kanaalka Poniente.
Qeybaha hoose ee magaalada sidoo kale waxay lahaayeen dabeecad difaac: waxay doonayeen inay ka ilaaliyaan dekedda muhiimka weerarada cadowga. Xilligan, laba ayaa weli ah: tii Carlos V, oo la dhisay xilliyadii Fernando de Aragón, iyo midka San Giacomo, saarid iyo si kafiican tii hore.
Si kastaba ha noqotee, laga yaabee meesha ugu quruxda badan Brindisi waa fagaaraha Duomo, taas oo, sida magaceeda ka muuqata, ka Kaniisad (waa maxay macnaheedu cathedral). Waa macbud la dhisay qarnigii XNUMXaad sida ku cad buugaagta Romanesque. Si kastaba ha noqotee, waxaa waxyeeleeyay dhulgariir, waxaa dib loo dhisay qarnigii XNUMXaad. Sidaa darteed, dhismaha aad hadda arki karto wuxuu isku daraa baroque iyo neoclassicism.
Waxa kale oo aad ku arki kartaa fagaaraha Duomo the Balsam Palace loggia, balakoonka laga ilaaliyo dhismaha aasaasiga ah ee qarnigii saddex iyo tobnaad; dhismaha Seminar, qasri qarnigii XNUMX-aad oo ay ku yaalaan Matxafka Diocesan ee Giovanni Tarantini; ah Matxafka Qadiimiga ah ee Gobolka iyo xil-ka-qaadista Portico ee Knights Templar, oo ka kooban laba arcadood oo Gothic ah oo lagu kala saaray tiirka Giriigga.
Magaalada Talyaanigu aad bay muhiim ugu ahayd xilliyadii Roomaanka. Iyadu waxay ka timid Rome iyada oo loo marayo Appia iyo iyada oo loo marayo Trajana. La yaab kuguma noqon doonto, sidaa darteed, in ay leedahay dhawr haad oo qadiimiga ah oo wakhtigaas ka mid ah.
Waxaa ka mid ah column roman, astaanta magaalada; ah haamo biyo mareenka hore, iyo aagga qadiimiga ah ee Saint Pietro degli Schiavoni, kaasoo ku yaal Tiyaatarka Verdi hoostiisa.
Taallo loogu talagalay Badmaaxa
Dabeecad kaladuwan ayaa leh taallada cajiibka ah ee Badmaaxa, oo la dhisay soddonkii qarnigii la soo dhaafay, qaybtiisuna tahay bartamaha xardhan, ayaa dhulka ka kacda konton iyo saddex mitir.
Waxa kale oo aad ka arki kartaa Brindisi the Taallo loogu talagalay kuwa dhacay, isla muddadaas, iyo mid u gaar ah abwaanka Laatiinka ah Virgilio, oo sannadihii ugu dambeeyay hawlgab ku qaatay magaalada. Labaduba waa qurux badan yihiin sida loogu sameeyay marmar cad Carrara.
Taallo kale oo Brindisi ah
Magaalada quruxda badan ee Talyaanigu waxay leedahay taallooyin badan oo aan kugula talineyno inaad booqato. Ka mid ah macbadyada diinta, waxaad leedahay kaniisadaha San Benedetto, ee Saint John ama Santa Maria del Casale.
Marka laga hadlayo dhismooyinka madaniga ah, waxay muujinayaan Albaabka Mesagne, Albaabka hore ee magaalada laga soo galo, iyo Daaraha Granafei-Nervegna iyo Montenegro. Laakiin qiime badan ayaa weli leh Ilo wareedyo, oo bilaabmay qarnigii XNUMXaad, iyo by Torres, ee XVII.
Hareeraha magaalada talyaaniga waxaad ka heli kartaa qaali xeebaha sida Torre del Orso iyo Dos Hermanas. Laakiin, dhammaantoodba, barkadaha dabiiciga ah ee quruxda badan. Wicitaanku wuu ka dhex muuqdaa kuwan Grotto Gabay, ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah tobanka ugu quruxda badan adduunka.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa jardiinooyin dabiici ah oo cajiib ah oo aad ku dhex mari karto. Kuwaas waxaa ka mid ah, kan Salina oo ka tirsan Punta de Condesa, las Kaydka dabiiciga ee Bosco di Cerano, ee Guaceto Tower iyo Boscos de Santa Teresa.
Waxa lagu cuno Brindisi
Intaa kadib inaad u guurtay booqashada magaalada, waxaa fiican inaad batterigaaga dib ugu cusbooneysiiso cunno wanaagsan oo caadi ah. Liiskaagu wuxuu ku bilaaban karaa dhowr pettuli, kuwaas oo ah nooc ka mid ah xashiishka lagu buuxiyo noocyada kala duwan ee la kariyo sida miraha, khudradda ama kalluunka la cabo.
Markaas waxaad dalban kartaa a rissotto. Waxaan kugula talineynaa adiga tajedda, oo leh bariis, cuntooyinka badda iyo baradhada oo lagu kariyo foornada. Si kastaba ha noqotee, maraqa sidoo kale waa mid caadi ah, gaar ahaan kan Kareemka digirta, iyo khudradda la shiilay ee deegaanka.
Koorso labaad ahaan, waxaan kugula talineynaa kalluunka, oo aad ugu fiican aagga. Tusaale ahaan, ka xajmiga dabka lagu kariyey. Iyo, macmacaanka, waxaad leedahay macmacaan sida baasto di mandorle ama is qor. Laakiin sidoo kale farmaajo weyn iyo miro.
Sida cabitaanka, waxaad isku dayi kartaa qaar ka mid ah khamriga Apulian ee cajiibka ah, kuwaas oo leh astaamo asal ah. Waa kiiska Brindisi rosso o Rosato. Iyo, ugu dambeyn, hal koob oo ah Limoncello.
Sida iska cad, sidoo kale waxaad ku leedahay baastooyin wanaagsan iyo biisas magaalada Talyaaniga. Laakiin waxaan u ogolaaneynaa nafteena inaan kugula talinno liiska hore, kaas oo asal ahaan asal ah
Goorma ayey fiican tahay in loo safro magaalada Talyaaniga
Brindisi waxay leedahay a cimilo xaasidi kara. Jiilaalku waa mid fudud, oo hoos u dhacaa marar dhif ah oo ka hooseeya lix darajo Celsius, halka xagaaga ay kulul yihiin, oo meelaha dhaadheer ay si fudud ku gaarayaan soddon. Dhankeeda, roobabku waxay isku ururaan inta badan deyrta iyo jiilaalka.
Sidaa darteed, waqtiyada ugu fiican ee aad ugu safri karto Brindisi waa guga iyo xagaaga. Gaar ahaan tan koowaad, magaaladu waxay qaabishaa dalxiisayaal tiro yar, marka lagu daro, waxay u dabaaldegtaa ciidaha caadiga ah sida kuwa xiisaha leh Socodka Faraska Parato.
Sida loo tago Brindisi
Aad bay u badan tahay inaad u safarto magaalada Talyaaniga oo dhinaca badda ah. Sannad kasta waxaa soo gala tiro badan safarrada taas oo ka dhigaysa meel ay ku joogsato dhexdeeda. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa diyaarad. The Garoonka diyaaradaha Salento Waa mid caalami ah waxayna u jirtaa lix kilomitir oo keliya aagga magaalooyinka.
Sidoo kale waa xarun isgaarsiineed oo muhiim ah tareenka ka helo tareenada Roma iyo magaalooyin kale. Laakiin, haddii aad doorbideyso gaariga, waxaan kuu sheegi doonaa taas, si aad u tagto Brindisi, waa inaad ka gudubtaa Wadada weyn ee Bari-Lecce ka dibna by SS 16 Adriatica.
Gabagabadii, Brindisi Waxay ku siineysaa taalooyin qurux badan, goobo dabiici ah oo wanaagsan, cimilo wanaagsan iyo gaashansoor macaan. Maxaad sugeysaa inaad abaabusho safarkaaga magaalada Talyaaniga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Brindisi